Ngwongwo Chiiz Chiiz
Wenezdee 3 Febrụwarị 2021
Ngwongwo Chiiz Chiiz Patrick Sarran mepụtara trosh a Coq cheese na 2012. Ihe ijuanya nke ihe a na-adọrọ adọrọ na-atọ ndị mmadụ ụtọ ịmata ndị ọrụ, mana emehiekwala, nke a bụ isi ọrụ. A na-enweta nke a site na iji akwa osisi na-acha uhie uhie nke etolite etolite etolite etolite etolite etolite etinyere na a ga-eyịride n'akụkụ iji gosipụta agwa dị iche iche nke chiiz. Site n'iji aka were ibugharị ụgbọ ahụ, mepee igbe ahụ, na-agbatị bọọdụ iji mee ohere maka efere ahụ, na-atụgharị diski a iji belata akụkụ chiiz, onye na-ahụ maka ọrụ nwere ike ịmalite usoro n'ime obere mpempe nka.
Troule Ọzara Chiri Akpọrọ
Tiuzdee 2 Febrụwarị 2021
Troule Ọzara Chiri Akpọrọ Emepụtara ihe ngosi a a na-emeghe emeghe maka nri ndị dị na oriri na ọ inụ restaurantsụ ụlọ nri na 2016 ma bụrụ nke kachasị ọhụrụ na mpaghara K. Ihe eji eme ihe ndi ozo di nma iji zue oke, oru oma, olu na uzo. Usoro mmeghe dabere na mgbanaka na-agbagharị na diski iko acrylic. Mpekere beech abụọ a na-akpụ akpụ bụ ụzọ ntụgharị yana yana aka iji mepee akpa ngosi na ịkwaga ebe a na-ere nri. Ihe njikọ ndị a na-enyere aka ịtọ ọnọdụ maka ọrụ ma gosipụta ngwaahịa egosipụtara.
Ọrụ Ọ Drinkụ Drinkụ Na-Ekpo Ọkụ Na Ahịhịa Ọhụrụ
Mọnde 1 Febrụwarị 2021
Ọrụ Ọ Drinkụ Drinkụ Na-Ekpo Ọkụ Na Ahịhịa Ọhụrụ Patrick Sarran mepụtara Herbal Tea Garden dị ka ihe pụrụ iche maka Landmark Mandarin Oriental nke Hong Kong na 2014. Onye na-ahụ maka nri chọrọ onye nwere egwuregwu ọ ga-eme ememe tea. Ihe osise a na-ejigharịrị koodu ndị Patrick Sarran mepụtara na K Series trolleys ya, gụnyere KEZA cheese trolley na Km31 multifunctional trolley, nke eserese ala ndị China na-emetụta.
Mbọsị Ụka 31 Jenụwarị 2021
Champeenu Champeenu BOQ bụ ebe a na-asa sọlfọ iji na-eje ozi champeenu n'oriri. Ejiri osisi, ọla, resin na iko mee ya. Ihe ngosi okirikiri na-ahazi ihe na ihe dị ka akụkụ dị mkpa ekike. A na-etinye ọjà ọkọlọtọ na corolla, isi ala, n'okpuru akwa resin ọcha, na-echebe ya na uzuzu na ujo. Ngwakọta ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ifuru, na-akpọ ndị ọbịa ka ha bịa nwee okirikiri iji drinkụọ mmanya dị mma. Nke mbu, obu ngwa ihe eji enyere ndu odi nma ichoro.
Satọdee 30 Jenụwarị 2021
Tiered Trolley Llekwụ nzọ ụkwụ a bụ otu n'ime ihe dị iche iche nke usoro onye nrụpụta K maka maka akara nke QUISO. Ejiri osisi siri ike mee ya mma. Urkpụrụ ya siri ike na nke na-eme ka ọ dị mma maka ijere mmanya na tebụl ụlọ nri. Maka nchekwa na ịdị mma nke ọrụ ahụ, a na-akwụsị iko ndị ahụ site na kwushin, a na-egbochi karama ndị ahụ site na mkpuchi na-enweghị mkpọda, wiil ndị na - eme njem nwere ezigbo mma na-enweghị ihe ọ bụla.
Fraịdee 29 Jenụwarị 2021
Multifunctional Trolley Patrick Sarran mepụtara Km31 maka nnukwu oriri nke ụlọ oriri na ọ usesụ restaurantụ. Ihe mgbochi kachasị bụ enweghị ọrụ. Enwere ike iji ụgbọ ala a rụọ ọrụ naanị otu maka ijere otu tebụl, ma ọ bụ n'usoro ya na ndị ọzọ maka nri nkịta. Onye rụrụ ya chepụtara ihe dị n’elu Krion n’elu ya n’elu ebe ahụ wheeled wuru maka ọtụtụ trolleys dị ka KEZA, emesịa Kvin, Herbal Tea, na Kali, jikọtara ọnụ maka usoro K. Obi ike nke Krion kwere ka ahọta ngwụcha ọkụ zuru oke, yana ike iji chọrọ ntọala maka okomoko.
Ballo Igwe Okwu Satọdee 27 Febrụwarị
CATINO Nchịkọta Nke Ụlọ Ịsa Ahụ Fraịdee 26 Febrụwarị
Temple Oche Achicha Tọọzdee 25 Febrụwarị
Ngwongwo Chiiz Chiiz Troule Ọzara Chiri Akpọrọ Ọrụ Ọ Drinkụ Drinkụ Na-Ekpo Ọkụ Na Ahịhịa Ọhụrụ Champeenu Champeenu Tiered Trolley Multifunctional Trolley